Samsung Galaxy Fold: Nkọwa, Ahịa na Ntọhapụ | Gam akporosis
Bọchị abịa. Ka ọnwa nke asịrị na ọtụtụ mkpọsa gasị gasịrị, Samsung ewebatala Galaxy Fold, ya mbụ mpịachi ama, na eze. Nọvemba ikpeazụ bịara ihe ngosi mbụ nke ngwaọrụ ahụ, nke ị nwere ike ịhụ nkenke ụfọdụ n'ime atụmatụ ahụ. Ekem ke Jenụwarị anyị nwere data ọhụrụ banyere ngwaọrụ ahụ na CES 2019. N'ikpeazụ taa, e gosipụtara ya.
Ekwentị a emeela isi akụkọ n'ọnwa ndị a niile. Ọbụna ụnyaahụ anyị nwetara ozi ọhụrụ banyere ya, dị ka aha gị. Mana Samsung Galaxy Fold bụ onye ọrụ gọọmentị. A na-akpọ smartphone gbanwere ahịa ya na nhazi ya na nkọwa ya. Gịnị ka anyị pụrụ ịtụ anya ya?
Samsung chọrọ weghachite ọnọdụ ya dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ n'ahịa. Maka nke a, akara ahụ chọrọ iji emume ncheta afọ iri nke Galaxy mbụ jiri ngwaọrụ a. Ọ bụrụ na Apple kwalitere iPhone X n'oge ya, ndị Korea hapụrụ anyị Galaxy Fold a. Ngwaọrụ ha ji achọ imeri ahịa a.
1 Nkọwa Samsung Galaxy Fold
2 Samsung Galaxy Fold: smartphonedị kachasị ọhụrụ ama ama
Nkọwa Samsung Galaxy Fold
Ngwaọrụ a bụ nchikota nke imewe na nkọwa. Ọbụghị naanị na ọ dabere na ịbụ usoro mpịachi nwere usoro ọhụụ na ahịa, mana anyị na-achọtakwa nkọwa na elu nke ngwaọrụ ahụ. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke Samsung Galaxy Fold:
Nka na ụzụ nkọwa Samsung Galaxy Fold
Nlereanya Fold Galaxy
Usoro njikwa Achịcha 9 Pee na Otu UI
Ihuenyo 4.6-anụ ọhịa HD + Super AMOLED (21: 9) ngosipụta dị n'ime na 7.3-inch QXGA + Dynamic AMOLED (4.2: 3) Infinity Flex display
Nhazi Exynos 9820 / Snapdragon 855
Nchekwa n'ime 512 GB UFS 3.0
Igwefoto na-aga n'ihu 16 MP f / 2.2 ultra-wide angle 12 MP Dual Pixel wide-angle na agbanwe oghere f / 1.5-f / 2.4 na ngwa anya ihe oyiyi stabilizer + 12 MP telephoto lens nwere ntinye anya abụọ na-amụbawanye na f / 2.2 aperture
Igwe n'ihu 10 MP f / 2.2. + 8 megapixel f / 1.9 omimi ihe omimi na 10 MP f / 2.2 na mkpuchi.
Njikọ Bluetooth 5.0 A-GPS GLONASS WiFi 802.11 ac USB-C 3.1
Atụmatụ ndị ọzọ Akụkụ mkpisiaka agụ compass gyroscope NFC
Batrị 4.380 mAh
Ibu ibu 200 grams
Ahịa 1980 dollar
Ihe nlere a abụrụla ihe ịma aka nye Samsung. Companylọ ọrụ ahụ ekwuola na e mepụtara ihe ọhụrụ na usoro mmepụta ihe iji mee ka o kwe omume na ihe nlereanya a rute n'ahịa. Iji maa atụ, etu esi ehulata ya dị mkpa. Ebe ọ bụ na ihe nlereanya a na-agbakọta n'ime. Yabụ mgbe ị na-ehulata, akụkụ nke ihuenyo na-abịarukwu ibe ha nso.
Mgbe apịaji, anyị na-ahụ nnukwu ihuenyo 7,3-inch na ngwaọrụ. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ewebatala ihuenyo nke 4,6 nke abụọ. Kedu nke ga-ekwe ka ọtụtụ ojiji nke ekwentị dabere na ọnọdụ ahụ. Ihuenyo abụọ na-abata na oke mkpebi. Karịsịa nke buru ibu, ezubere iji rie ọdịnaya oge niile.
Samsung Galaxy Fold: smartphonedị kachasị ọhụrụ ama ama
Echiche nke a Fold Galaxy bụ inwe ike ịnwe ngwaọrụ nke na-emegharị n'ọnọdụ ọ bụla. Mgbe apịaji, enwere ike ijide ya n'ọbụ aka. Ebe mgbe emepere ya, ị nwere ike ile vidiyo na ụzọ kachasị mma. Samsung kọwara ya dị ka a ama, mbadamba na igwefoto n'otu ngwaọrụ. Ezigbo nkọwa maka ngwaọrụ a.
Ime ọtụtụ ihe dị mkpa na ngwaọrụ a. Ya mere, Samsung ga-enye gị ohere ịnweta ngwa atọ mepere n'otu oge mgbe ejiri ya na ọnọdụ mbadamba. Yabụ ị nwere ike ịlele vidiyo ma nwee ngwa na ngwaọrụ n'otu oge. Nke a ga - enyere gị aka mepee ngwa ndị kachasị mkpa n'oge niile n'ụzọ dị mfe. Samsung arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dịka Google na Microsoft na usoro a, iji mee ka o kwe omume. A na-ekesa ngwa ndị ahụ n'elu ihuenyo ahụ, n'ụzọ niile ha nwere ike imeghe, mana jiri ha mee otu oge. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe nha nke ngebichi ndị a n'ụzọ dị mfe.
Igwefoto isii bụ ihe anyị na-ahụ na ngwaọrụ ahụ. Igwefoto atọ na azụ, abụọ n'ime na otu n'ihu. Yabụ ị nwere ese foto maka akụkụ ọ bụla nwere njedebe a sitere na akara Korea. Anyị nwere ike ịhụ etu eserese si nweta uru na ụlọ ọrụ a. Ngwakọta dị ike, nke anyị nwere ike iji nweta njedebe kachasị elu na ụdị ọnọdụ niile.
Batrị bụ akụkụ nke welitere obi abụọ. Kedụ ka ị ga - esi nweta batrị na ekwentị mpịachi ekwentị? Samsung na-edozi ya n'ụzọ dị mfe na Galaxy Fold a. Ha nzọ na batrị abụọ. Ya mere, anyị nwere obodo kwụụrụ onwe ya na ekwentị oge niile, na mgbakwunye na ịbụ nnukwu ọhụụ maka Samsung. Site na inwe batrị abụọ ga-arụ ọrụ n'otu ama. Na nke a anyị nwere ikike nke 4.380 mAh. Enweghị ihe ekwuru maka ugbu a banyere ọnụnọ nke ngwa ngwa na ngwaọrụ.
Na mgbakwunye na ịmara ihe niile banyere ama a, Samsung na-ahapụkwa anyị ozi gbasara ụbọchị mmalite ahịa ya, na mgbakwunye na ọnụahịa ya. A nụwo ọtụtụ ihe banyere ego Galaxy Fold a ga-enwe. Mana n’ikpeazụ anyị enwetala data niile gbasara ya. Ọ bụ ezie na anyị eburu ụzọ mara na ụdị a agaghị adị ọnụ ala. Ekwentị ọ gafere ọnụahịa anyị bu n'uche?
Na mgbakwunye na ọnụahịa ya, nkọwa ọzọ masịrị anyị bụ ụbọchị mwepụta ngwaọrụ. Akụkụ ọzọ banyere nke ọtụtụ asịrị dị na ọnwa ndị a. O di nwute, anyi enweela azịza nke asịrị ndị ahụ. Mbido ahịa ya ga-amalite site na Eprel 26. Ya mere, anyị ga-echere ọnwa ole na ole ruo mgbe a ga-azụta ya n'ụlọ ahịa.
Ebuputa na ngụkọta nke agba anọ: Bulu, ọla edo, ọla ọcha na oji. Na mgbakwunye, dabere na agba, ọ ga-ekwe omume ịhazi mpaghara ebe ngwaọrụ ahụ gbagọrọ agbagọ. Yabụ onye ọrụ ọ bụla ga-enwe ike ikpebi ọdịdị nke Fold Galaxy ha. Maka ọnụahịa, ewepụtara ya site na $ 1.980 na ọnụahịa gaa n'ụlọ ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Galaxy Fold: Samsung nke mpịachi ama ama ama ama ama ama